မြေလွတ် မြေရုိုင်းတဲ့လား | MoeMaKa Burmese News & Media
တနေ့ က ရွာက သူငယ်ချင်းဆီဖုန်းဆက်ပြီး သာကြောင်းမာကြောင်းလေး မေးခဲ့ပါတယ်။
တောင်ပေါ်သား တွေမှာ တော့ ဗိုလ်မှူး အဆင့်မပြောနဲ့ တပ်ကြပ်လောက်ကိုတောင် တော်တော်သိ တော်တော်တတ် လို့ ထင်ကြတာ။
ကျွန်တော်လည်း ဟိုအရင်က အဲလိုဘဲ ထင်တာပါ။ ခုတော့ ၀န်ကြီး အဆင့်တောင် စဉ်းစား ဆင်ခြင် ညဏ် မရှိသော၊ ပရမ်းပတာ စကားပြော ခြိမ်းခြောက်တတ်သော၊အမိန့် ကို ဝေဖန်မပိုင်းခြားနိုင်သော စစ်သား လို့ဘဲ မှတ်တော့တယ်။အဲလိုပြောလို့ စစ်သား အားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ငါတို့က ကချင်ဖြစ်လို့ ဒီလို မတရား အနိုင်ကျင့် ခံရတာ…ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်လည်း ဘုရားသခင်ဆီမှာ ဆုတောင်းပြီး နေရအောင် ဘုရားသခင်သာ အားလုံးကို တတ်နိုင်တယ် အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့မိတယ်။
အဲဒီ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု အောက်မှာ ကချင်တမျိုးတည်း ခံနေရတာ မဟုတ် ဘူးလို့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မိသားစုကို သိစေချင်လိုက်တာ။
ဘယ်လို ကမ္ဘာကျော် တက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီးက ဘွဲ့တွေရပြီး ဗိုလ်မှူး အဆင့်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်တာလဲတော့ မသိဘူး
မြန်မာနိုင်ငံ မှာနေ ကချင်ပြည်နယ်မှာ တာဝန်ကျပေမယ့် ကချင်လူမျိူးတွေရဲ့ထုံးတမ်း စဉ်လာကို လားလားမျှမသိတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေ နယ်တွေမှာ လာစုနေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
ဘယ်ပညာတတ်၊ယဉ်ကျေးနားလည်တဲ့ တဦးတယောက်မှာ နယ်ကို မရောက်တာ ဟိုးအရင် ကတည်းက အစိုးရ ၀န်ထမ်းလောကမှာ ရှိပြီးသား။
မြန်ပြည်မြို့တော်တွေမှာ အကျင့်ပျက်၊ကလန်ကဆန် လုပ်တဲ့ ၀န်ထမ်းဆို အလုပ်က မထုတ်ဘဲ နယ်ပို့ လုပ်တာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဘဲမဟုတ်လား။
ဥပဒေဆိုတာ ကြီးက ပြည်သူလူထုကို ဘာဆို ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် မသိနားမလည် တဲ့ သူတွေကို ထိခိုက်နှစ်နာအောင် လုပ်တဲ့ ဥပဒေ မဖြစ်သင့်ဘူး။
သိနားလည်တဲ့ သူတွေကိုလည်း နားလှည့် ပါးရိုက် မလုပ်သင့်ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တနိုင်ငံလုံးက မြေလွတ်မြေရိုင်းရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
ကိုယ် လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ဇွတ် သိမ်းယူတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ်မလုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်တဲ့ သူ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေလုပ်ပါစေပေါ့။
မင်းတို့ တည်တဲ့နေရာတွေက မြေလွတ် မြေရိုင်းပေါ်မှာ လို့ ဆိုမယ့် သူရှိလာအုန်းမှာလား။
သရုပ်ဖော်ပန်းချီအား ဤနေရာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
One Response to မြေလွတ် မြေရုိုင်းတဲ့လား
mgoogyaw on March 3, 2013 at 6:38 pm
Yes,when ever they wants to occupied the lands,they(Government) use the words,that,the land belongs to the State. Actually,they mean it for them or their cronies,to take over.There is no changes in Burma,at all,who say “Burma is changing? Because,all the power user Ministzers are all ogf the former Generals,and they are protecting for themselves and their cronies.All tricks,to cheat the World,and yet ,nearly,all Leaders ,try to believe them,shameful.